OWETHEKU NESAMBA SEMALI YEZIGCAWU EZIQGUQGUZELA IMFUNDO – Sivubela intuthuko Newspaper
OWETHEKU NESAMBA SEMALI YEZIGCAWU EZIQGUQGUZELA IMFUNDO
IMeya yeTheku , uKhansela Mxolisi Kaunda
UMKHANDLU weTheku oholwa nguKhansela Mxolisi Kaunda sewumemezele ukuthi uzosebenzisa imali efinyelela ku-R3, 4 million ngenhloso yokusabalalisa izigcawu zokucija abafundi bakamatikuletsheni mayelana nemikhakha abangayikhetha uma sebesesezikhungweni zemfundo ephakeme.
Le mali uMkhandlu weTheku uthi uzokwazi ukuthi uyisebenzise kuze kube yiminyaka emithathu ilandelana. Ngaphansi kwalolu hlelo izikole ezingaphansi koMkhandlu weTheku zizophinde zithole ithuba eliyingqayizivele lokuxoxisana ngezinto ezahlukene ezimqoka.
Lezi zigcawu kulindeleke ukuthi kukhulunywe ngazo kabanzi emphakathini ukuze zihehe abafundi bakamatikuletsheni ukuba bangesabi ukwenza imikhakha ebucayi kakhulu phakathi kwayo kubalwa iScience, ubunjiniyela, izibalo, kanye nezobuChwepheshe.
Lolu hlelo kuhlalukile ukuthi lwethulwe emhlanganweni wekomidi elengamele uMnyango wezokuHlaliswa kwabantu nengqalasizinda obubanjelwe khona eThekwini.
Konke obekubhungwa ngakho kabanzi kulo mhlangano kulindeleke ukuthi kube sekudluliselwa esigungwini esiphezulu nakuwona wonke umuntu oseMkhandlwini ukuze luqale lubonakale lusebenza.
Umbiko wakamuva uveza ngokusobala ukuthi uMkhandlu weTheku ubone kufanele kwenzeke lokhu ngoba likuqaphelile ukuthi lisasilele kakhulu ngemuva uma kukhulunywa ngemikhakha eyimvela kancane ikakhulukazi lena esibaluliwe ngenhla.
Lo mbiko uqhuba uthi lolu hlelo luyinto enhle kakhulu noluzobonakala lwenza umehluko omkhulu kakhulu kulo Mkhandlu kanye nasezinhlakeni ezahlukahlukene ngaphakathi kuwona lo Mkhandlu.
“Lolu hlelo luzosetshenziselwa ukuba lulekelele ukugqugquzela kanye nokusiza izingane zesikole ukuba zikwazi ukukhetha kahle imikhakha okuyiyona okumele ziyikhethe uma seziphothule ibanga leshumi. Futhi lokhu kuzosiza kakhulu ekutheni izingane zibe sethubeni elihle kakhulu lokuthi zihlabane ngemifundaze ezobe ivela kuMkhandlu weTheku kanye nakuHulumeni kanye nakwezinye izinhlaka ezahlukene,’’ kusho lo mbiko.
IKWAZULU NATAL NOHLELO LOKUXHASA OSOMABHIZINISI ABASAFUFUSA